Ihe nlele China CarbomerCAS: 9007-20-9 ụlọ ọrụ na ndị na-ebubata ya Binshare
Ihe nlele CarbomerCAS: 9007-20-9
Polyacrylic acid, nke a na-akpọ PAA, utu aha 2-acrylic acid homopolymer, mkpuchi mkpuchi acrylic, resin acrylic, polymer monomer, acrylic gbanwetụrụ resin, emulsion acrylic resin, bụ polymer mmiri na-agbaze nke acrylic acid, kamakwa ọ nwere ike ịgbari na pola ụfọdụ. ihe mgbaze.
Aha Bekee: Carbomer
Ụdị usoro: C15H17ClO3
Ibu molekul: 280.74668
EINECS enweghị. : 618-435-5
Ọnọdụ okpomọkụ: 116 ° C.
Njupụta: 1.2 g/ml na 25 Celsius
Polyacrylic acid, nke a na-akpọ PAA, utu aha 2-acrylic acid homopolymer, mkpuchi mkpuchi acrylic, resin acrylic, polymer monomer, acrylic gbanwetụrụ resin, emulsion acrylic resin, bụ polymer mmiri na-agbaze nke acrylic acid, kamakwa ọ nwere ike ịgbari na pola ụfọdụ. ihe mgbaze, dị ka methanol, di alkane na ethylene glycol. Akwụkwọ IKPE ỌRỊA IONIZATION 4.75. N'ihi na molekul nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke carboxyl, ọ nwere ike meghachi omume na alkali, mmanya, amine, kamakwa akpịrị ịkpọ nkụ, mbibi na mmeghachi omume dị mgbagwoju anya. Ọ nwere ike na -eji dị ka ndim gị n'ụlọnga, dispersant, flocculant, nyagide na film akpụ gị n'ụlọnga, wdg Ọ na ọtụtụ -eji mkpuchi, plastik, akwụkwọ Ndinam, akwa, roba, nri, ọgwụ, ntecha na mmiri ọgwụgwọ ọrụ.
Polyacrylic acid dị obere molekul bụ ihe siri ike na enweghị agba. Ihe ngwọta ya nwere 20% ~ 30% bụ odo edo edo ma ọ bụ mmiri viscous na -enweghị agba. Ibu arọ molekul bụ 500 ~ 5000 yana pH uru bụ 2 ~ 4. Nkwụsịtụ ya na-adị gburugburu 5 × 10-5, nke dị nso na dissociation nke acetic acid (1.8 × 10-5) ma buru nnukwu ibu karịa nke mbụ. dissociation mgbe nile nke carbonic acid. Ya mere, polyacrylic acid bụ acid na -adịghị ike siri ike karịa carbonic acid. Ọ na-abụkarị akwụkwọ kemịkal kwụsiri ike na acid siri ike, ntọala siri ike na oxidants, mana n'okpuru oke okpomọkụ ma ọ bụ ọkụ ogologo oge, polyacrylic acid dị obere molekul ka ga-edozigharị ọzọ, ka ịdị arọ ya na-abawanye, viscosity na-abawanye, n'ikpeazụ ọnọdụ gelatine nke oke mmiri ozuzo sitere na mmiri mmiri. Ọ bụ ụlọ ọrụ chelating na onye na -agbagọ agbagọ, ma nwee ike mepụta ogige siri ike yana ion ọla na mmiri, dị ka calcium na magnesium. Ọ na -enwekwa arụmọrụ dị mma, nke nwere ike ịgbasa irighiri amorphous dịka ogige kristal, ala, uzuzu, ihe na -emebi emebi na ihe na -emebi ihe na mmiri.
Eji ya dị ka onye na -egbochi ihe ma na -agbasasị na mmiri mmiri mmepụta ihe. Ezi ndakọrịta.
Enwekwara ike ịgwọ ya tupu ị waterụọ mmiri. A na -eji ya kewaa apịtị uhie na nkwadebe alumina. N'ime osisi chlor-alkali iji nụchaa brine maka imepụta ihe ịchọ mma, ime ude nwere ike ịkwalite nnabata nke flavus isi awọ, enwere ike iji ya maka mwepụta nchịkwa ọgwụ.
A na-eji ya iji kwadebe onye nnọchi maka akpụkpọ anụ na ụfọdụ ngwa ahịa dị elu. Ime agba acrylic ejiri maka ndozi chromate, tanning inyeaka, dịka, iji belata mmetọ chromium maka ịkwalite arụmọrụ nhazi nke polyvinyl chloride (PVC) nke ejiri dị ka ihe na -egbochi corrosion, ihe na -eme ka mmiri dị mma, onye na -eme ka ihe sie ike, onye na -eme ka ihe sie ike nke eji emecha akpụkpọ anụ. , dị ka onye na-ejuputa ihe, nha akwa akwa na njigide mmiri dị mma nke ejiri mee acrylic agba nke ihe nkiri-nwere ike mee ya dị ka onye na-emecha akpụkpọ anụ na nrapado, a na-ejikarị ya eme ihe ịchọ mma akpụkpọ anụ dị mfe dị ka akpụkpọ anụ ihu, akpụkpọ anụ uwe. , Chemicalbook setịpụrụ akpụkpọ anụ, nke nwere ike ịkwalite nguzogide gbagọrọ agbagọ, ịgbatị, nguzo ọkụ, nkwụsị ịka nká, nguzogide oyi na nguzogide okpomọkụ nke akpụkpọ anụ.
Ọ bụ onye na -ahụ maka mgbanwe ihe nkiri maka agba na ude iji gbanwee akpụkpọ anụ ihu granular.
IEnwere ike iji ya dị ka onye nnọchi anya na -enweghị nkwụsị, emulsifier, mkpụrụ na -ahụ maka ihe ịchọ mma dị elu na ndị na -enye ọgwụ.
Ọ bụkwa ihe kacha arụ ọrụ nke mmiri na-agbaze ka ọ na-agba.
A pụkwara iji ya na nsí eze, ihe na -eme ka ọ dị arọ na ihe nragide.
Ọ bụ onye na -agbasasịkarị, nwere ike carbonate carbonate, calcium sulfate na nnu ndị ọzọ nke microcrystals ma ọ bụ sedimenti achụsasịworo na mmiri na -enweghị mmiri ozuzo, iji mezuo ebumnuche nke igbochi mgbochi.
Na mgbakwunye na a na -eji ya dị ka onye na -egbochi ihe ma na -agbasasị na sistemụ mmiri jụrụ oyi, a na -ejikwa ya ebe niile n'ịme akwụkwọ, akwa, ibi akwụkwọ na agba, seramiiki, mkpuchi na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Eji ya na ụlọ ọrụ kemịkalụ, fatịlaịza kemịkalụ, ibi akwụkwọ na agba, ike ọkụ na ọgwụgwọ mmiri ndị ọzọ.
Ebumnuche: A na -eji ya na ọkụ eletrik, ígwè na ígwè, osisi kemịkalụ, osisi fatịlaịza, mmanụ mmanụ na sistemụ ntụ oyi na sistemụ mmiri jụrụ oyi ndị ọzọ na -ekesa iji gbochie ịba ụba.
Nke gara aga: Ọnụ ọnụ Lidocaine hydrochloride dị ọnụ alaCAS: 73-78-9
Osote: Ọnụ ahịa ezi uche na nnyefe ngwa ngwa DL-BANTHIONINECAS: 59-51-8